Madaxweynaha DFS Xasan Shiikh Maxamuud oo qurbajoogta Soomaalida ku amaanay kaalintooda horumarineed ee dalka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha DFS Xasan Shiikh Maxamuud oo qurbajoogta Soomaalida ku amaanay kaalintooda horumarineed ee dalka
Madaxweynaha DFS Xasan Shiikh Maxamuud oo qurbajoogta Soomaalida ku amaanay kaalintooda horumarineed ee dalka
August 16, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud .
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa ku amaanay qurbajoogta Soomaaliyeed kaalinta ay ku leeyihiin hrorumarinta dalka.
Madaxweynaha oo ka hadlayay shirka qurbajoogta oo shalay oo Isniin ahayd lagu soo gabagabeeyay caasimada Soomaaliya, Muqdisho, ayaa ugu baaqay qurbajoogta Soomaalida inay sii labanlaabaan dadaaalkooda ku aaddan dib u dhiska iyo horumarinta dalkooda hooyo.
“Qurbajoogta dadaal badan oo muuqda ayay sameeyeen si ay wadankooda wax ugu qabtaan, doorka ay cayaareenna waa mid dalka wax badan ka bedelay. Fariinta aan u dirayaa dhammaan qurbajoogta waxay tahay inay shaqada wanaagsan ee ay hayaan ay meesha ka sii wadaan, inay midnimadooda adkeeyaan iyo inay saameyn waxtar leh ku yeeshaan waddamada ay ku nool yihiin’’, ayuu yiri Madaxweynaha.
Ugu dambayna, qurbajoogta Soomaalida ayaa kaalin weyn ka qaadatay dib u dhiska dalka markii ay burburtay dowladii dhexe, sanad walba qurbajoogta Soomaalida ee caalamka ku nool ayaa lagu qiyaasa in ay 1.2 bilyan dollar ay u soo diraan qoysaskooda dalka ku nool.
October 1, 2016 Turkiga oo saldhigii milatari ee ugu horeeyay Afrika ka samaystay Soomaaliya
September 5, 2016 Soomaaliya oo hakisay qaadka Miirowga ee ka yimaada dalka Kenya
Sawiro: Howlgal ay wadajir uga sameeyeen Gaalkacyo ciidamada PSF iyo Danab oo lagu soo qabtay hub iyo gaari uu lahaa sarkaal Al-Shabaab ah
Somalia’s foreign minister is telling the U.N. General Assembly that his young government has made significant strides in fighting violent al-Shabab militants, and called on the world body to lift its long-standing arms embargo. Ahmed [...]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Taliyihii saldhiga dhexe ee ciidamada booliiska magaalada Gaalkacyo Cali Magafe ayaa lagu dilay qarax, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah. Taliyaha ayaa bumbo gaarigiisa loogu rakibay ku qaraxday saakay oo Arbaco ah [...]